रुघाखोकीले सतायो ? अपनाउनुस् यी सरल ५ उपाय
काठमाडौं – मौसम परिवर्तनको संघारमा रुघाखोकीको प्रकोप बढ्न गर्दछ । कतिपयले रुघाखोकी बढ्नेवित्तिकै अस्पताल धाउने र अनेक खालका ओषधी प्रयोग गर्ने गरेका छन् तर रुघाखोकी ‘सामान्य र नियमित प्राकृतिक परिवर्तन’ भएकाले यस्तोमा आधुनिक औषधीको प्रयोग आवश्यक छैन । बरु घर अथवा कार्यालयमै बसेर रुघाखोकीलाई कम गर्ने अनेक उपाय गर्न सकिन्छ । यसरी कम गर्न सकिन्छ रुघाखोकी:
क. नाक बजाउनुहोस् : रुघा लागेको बेला नाकलाई नियमित रूपमा सफा गर्नु जरुरी हुन्छ । त्यसका लागि एकापटिको नाकको प्वाल पुरिने गरी माथिबाट हातका औँलाले थिच्ने र अर्को खुला नाकको प्वालबाट ‘सीँ’ गर्नु उचित हुन्छ । दुवै नाक यसैगरी सफा गर्नुहोसस् र यति गरिसकेपछि हात र नाक दुवै सफा गर्नुहोस् ।
ख. आराम गर्नुहोस् : रुघाखोकीमा किन आराम गर्ने भन्ने लाग्न सक्छ । रुघाखोकीमा आराम गर्दा रुघाखोकी छिटो निको हुने सम्भावना बढी छ किनभने तपार्इँ आराम गरेर बस्दा तपाईँको शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता केवल रुघाखोकी नियन्त्रणमै मात्र केन्द्रित हुन्छ र छिट्टै रुघाखोकी निको हुन्छ ।
ग. कुलुकुल गर्नुहोस् (कुल्ला) : मनतातो पानीमा नुन ९सम्भव भए बिरेनुन ०हालेर कुल्ला गर्नुहोस् । यसले तपाईँको घाँटीभित्रको सुख्खा भागलाई स्वस्थ्य पार्न धेरै मदत मिल्छ । दिनको चार पटक यसो गर्नु ठिक हुन्छ । कुल्ला गर्ने पानीमा नुनसँगै मनतातो पानीमा कागती राख्नु उचित हुन्छ ।
घ. तातो तरल पदार्थ र फलफूल खानुहोस् : तातो पानी नियमति पिउँदा त्यसले बन्द भएको नाकलाई खुलाउन सहयोग गर्छ । अहिले त स्थानीय बजारहरूमा तुलसी लगायतका जडीबुटी राखिएका चियाहरू समेत उपलब्ध छन् । त्यस्तै, फलफूलमा पर्याप्त भिटामिन हुने भएकाले सबैखालका रोगसँग लड्दछ । तिनको सेवन गरे झनै राम्रो । यसर्थ, रुघाखोकीको बेला खासगरी सुन्तलजन्य फलफुल अत्यन्त लाभकारी हुन्छ ।
ङ. वास्फस्नान : आम नेपालीहरूले तातो वाफको स्नान लिन उति व्यवहारिक छैन तर सम्भव भएसम्म तातो पानीले नुहाएर तत्कालै रुमालले पुछ्दा रुघाखोकीमा धेरै राहत हुन्छ । र, अर्को कुरा धेरैले रुघाखोकीमा सिँगान पुछ्ने रुमाल बारम्बार एउटै प्रयोग गर्ने गर्छन् । यो एकदमै गलत हो । एक पटक प्रयोग गरेको रुमाल दोहो-याएर प्रयोग नगर्नुस् । त्यसका सट्टा बजारमा उपलब्ध टिस्यु पेपर प्रयोग गर्नुस् । प्रयोग गर्नुस्, फाल्नुस् ।
यसो गरेमा तपाईँको रुघाखोकी सहजै निको हुन्छ । ख्याल राख्नुहोस् , प्रकृति आफैँमा ठुलो औषधालय हो ।